विवादास्पद ‘ह्याप्पिनेश रिपोर्ट’ | गृहपृष्ठ
Home लेख | दृष्टिकोण विवादास्पद ‘ह्याप्पिनेश रिपोर्ट’
संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट सोलुसन्स नेटवर्कले भर्खरै सार्वजनिक गरेको वर्ल्ड ह्याप्पिनेस रिपोर्ट (डब्ल्यूएचआर) २०१९ अर्थात् खुशी परिसूचकले नेपालीहरूको खुशीको स्तर बढेको देखाएको छ । के नेपालीको खुशीको स्तर बढेकै हो त ? के यस्तो खुशीको मापन नै सही खालको छ त ? यसमा धेरै नै विवाद पाइन्छ ।
गतवर्षको तुलनामा यस वर्ष नेपालीको खुशीको स्तर शून्य दशमलव शून्य ३३ प्रतिशतले बढेको छ । यही वृद्धिका कारण विश्वका १ सय ५६ देशको सूचीमा यस वर्ष नेपालको वरीयता १ स्थान माथि उक्लिएर सयमा पुग्यो । सन् २०१२ मा प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन थालेदेखिको सूचीमा नेपालको अवस्थामा क्रमशः उल्लेख्य सुधार हुँदै आएको छ । सन् २०१३ मा खुशीको मामिलामा विश्वमा नेपाल १ सय ३५ औं स्थानमा रहेको थियोे, जुन अहिले सयमा पुगेको छ ।
डब्ल्यूएचआरले सूचीमा समाविष्ट हरेक देशको सामूहिक खुशी मापन गर्छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन थालेदेखि नै शीर्ष स्थानमा स्कान्डिनेभियन देशहरूको वर्चस्व छ । पुछारमा अर्थात् सबैभन्दा दुःखी देशको सूचीमा भने द्वन्द्वग्रस्त देशहरू रहँदै आएका छन् । पछिल्लो प्रतिवेदन पनि यस अघिका प्रतिवेदनभन्दा खासै फरक छैन । वर्ल्ड ह्याप्पिनेस रिपोर्ट २०१९ अनुसार ७ दशमलव ७६९ अंकसहित फिनल्यान्ड विश्वको सबैभन्दा खुशी देश हो । खुशीको स्तर २ दशमलव ८५३ अंक मात्रै रहेको दक्षिण सुडान भने विश्वको सबैभन्दा दुःखी देश हो । मार्च २० मा अन्तरराष्ट्रिय खुशी दिवस मनाउन थालेदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन)ले वर्षेनि खुशी देशहरूको सूची निकाल्दै आएको छ ।
कसरी नापिन्छ खुशी ?
बजार अनुसन्धाता संस्था ग्यालपले गरेको विश्वव्यापी सर्वेक्षण अनुसार आम जनजीवन मूल्यांकन गर्न सोधिएको प्रश्नको उत्तरको आधारमा यो प्रतिवेदन तयार पारिन्छ । प्रतिवेदनका लागि ग्यालपले वार्षिक सर्वेक्षणमा हरेक वर्ष उही समयमा, उही तरीकाले, उही खाले प्रश्नहरू सोध्छ । सूची तयार पार्न हरेक देशबाट भौगोलिक र जनसांख्यिक दृष्टिकोणले सबैको प्रतिनिधित्व हुने गरी ‘र्‍यान्डम’ तरीकाले उत्तरदाता चयन गरिन्छ । यस क्रममा १५ वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका १ हजार व्यक्तिलाई यसमा सहभागी बनाइन्छ । यस क्रममा पछिल्ला ३ वर्षको अवधिमा सोधिएको औसत प्रत्युत्तरका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारिन्छ । यस वर्षको प्रतिवेदनमा सन् २०१६ देखि सन् २०१८ को सर्वेक्षणमा सहभागीहरूले दिएको उत्तर समावेश गरिएको छ ।
सर्वेक्षणमा सहभागीहरूलाई शून्यदेखि १० अंक लेखिएको एउटा भर्‍याङको कल्पना गर्न भनिन्छ । भर्‍याङको सबैभन्दा माथिको खुड्किलालाई १० अंक र पुछारको खुड्किलोलाई ० अंक दिइन्छ । माथिको खुड्किला सम्भव भएसम्मको राम्रो जीवन र पुछारको खुड्किलो भने सम्भव भएसम्मका नराम्रो जीवन मान्न लगाइन्छ । अहिले आफूले बिताइरहेको जीवनलाई भर्‍याङको कुन खुड्किलोमा राख्छौ भन्ने प्रश्न सहभागीहरूलाई सोधिन्छ । सहभागीहरूले दिएको यही उत्तरका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारिन्छ । तर, प्रतिवेदनमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी), औसत आयु, दानको भावना, सामाजिक सुरक्षा, भ्रष्टाचारबारे धारणा, विकल्प रोज्न पाउने स्वतन्त्रता लगायत तत्त्वको आधारमा देशहरूको वर्गीकरण भने गरिन्छ । यी तत्त्वमा राम्रो स्थिति भएका देशहरूको खुशीको स्तर पनि धेरै हुने सम्भावना बढी हुन्छ । यसमा सहभागी देशका नागरिकको जीवनलाई डिस्टोपिया (संसारकै सबैभन्दा दुःखी मानिस भएको कल्पनाको देश) का निवासीहरूको जीवनसँग पनि तुलना गरिन्छ ।
सर्सर्ती हेर्दा डब्ल्यूएचआर तयार पार्ने पद्धति छिटो र सजिलो जस्तो लाग्छ । तर, ‘डुइङ बिजनेश रिपोर्ट’ लगायत अन्य प्रतिवेदनझैं यो पनि विवादरहित भने छैन । सन् २०१६ मा सार्वजनिक प्रतिवेदनको सूचीमा गृहयुद्धले थलिएको सोमालिया केन्याभन्दा ४६ स्थान माथि देखाएपछि भने प्रतिवेदन निकै आलोचित बनेको थियो । पछिल्लो प्रतिवेदनमा पनि सोमालिया केन्याभन्दा ९ स्थान माथि छ । दक्षिण एशियामा पनि सबैभन्दा खुशी देशका रूपमा पाकिस्तान रहनुलाई पनि धेरैले आश्चर्यका रूपमा हेरेका छन् । पछिल्ला केही वर्षयता सूचीमा पाकिस्तानको अवस्था निकै राम्रो छ । अन्य सूचकांकहरूमा दक्षिण एशियामै सन्तोषजनक अवस्थामा रहेको भुटानको भने स्थिति ठीक उल्टो छ । ग्रस नेशनल ह्याप्पिनेश इन्डेक्सको अवधारणा ल्याउने भुटान नै यसमा पाकिस्तानभन्दा पछाडि पर्नुले यस्तो मापनलाई पत्याउन गाह्रो देखिन्छ ।
दक्षिण एशियाली देशहरूमध्ये यस अघिका वर्षहरूझैं भारतलाई अफगानिस्तान बाहेक सबै देशले उछिनेका छन् । भ्रष्टाचार सूचकांक, इज अप डुङ बिजनेश लगायत अन्य अन्तरराष्ट्रिय प्रतिवेदनमा राम्रो प्रदर्शन गरेर पनि ह्याप्पिनेश रिपोर्टमा भारत किन पछाडि रह्यो ?
विरोधको अर्को कारण हो, अन्य ह्याप्पिनेश सर्वेक्षणसँग यो नमिल्नु । सन् २०१२ मा ग्यालपको सर्वेक्षणले पानामालाई विश्वकै सबैभन्दा खुशी देशका रूपमा चित्रित गरेको थियो । यसलाई पछ्याउने क्रममा पाराग्वे, इल साल्भाडोर, भेनेजुएला, ट्रिनिडाड एन्ड टोबागो, थाइल्यान्ड, ग्वाटेमाला, फिलिपिन्स, इक्वेडर र कोस्टारिकालाई सबैभन्दा खुशी देश देखाएको थियो । सन् २०१४ मा अनुसन्धाता संस्था प्यूले ४३ देशमा गरेको सर्वेक्षणमा भने मेक्सिको, इजरायल र भेनेजुएला सर्वाधिक खुशी देश थिए । तर, यो सूचीमा जापान अर्जेन्टिना, पेरू, मलेशिया, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रिका र निकारागुवाभन्दा पछाडि थियो । त्यसको अर्थ यी देशका बासिन्दाभन्दा जापानीहरू धेरै दुःखी छन् भन्ने हो त ?
विश्वमै सबैभन्दा धेरै डिप्रेशन कम गर्ने औषधि प्रयोगकर्ताहरू आइसल्यान्ड र डेनमार्कमा छन् । तर, यी २ देश सबैभन्दा खुशी देशमध्ये पर्छन् । फिनल्यान्डमा विकसित देशमध्ये आत्महत्या गर्नेको दर सबैभन्दा धेरै छ । तर, पछिल्लो २ वर्षयता यो लगातार वर्ल्ड ह्याप्पिनेश इन्डेक्स शीर्ष स्थानमा रहँदै आएको छ ।
यस्ता सर्वेक्षण व्यक्तिको निजी धारणामा निर्भर हुन्छ । हरेक मानिसले फरकफरक कुरालाई महत्त्व दिन्छन् । व्यक्तिको खुशीलाई उसको जिन, व्यक्तित्व लगायत तत्त्वले पनि प्रभाव पार्छ । त्यसैले यसबाट आउने प्रश्न कत्तिको भरपर्दो छ भन्न सकिँदैन । पछिल्लो समय प्रतिवेदनमा खुशी मापन गर्ने तरीका नै फेर्नुपर्ने कुराहरू पनि उठेका छन् ।